Fitaovana miasa irery | Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 29, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Douglas Karr tsy maintsy nipaoka ny ati-dohako aho rehefa nanoratra Ahoana ny fomba iasana irery. Nieritreritra betsaka momba an'io zavatra be asa io aho, momba ny fitsambikinana tsy tapaka avy amin'ny tidbit ka hatrany amin'ny tidbit ary manao asa mihoatra ny iray indray mandeha dia mahatsapa fa manalatra fotoana ahy (ary mahatonga ahy hahatsapa ho vendrana). Rehefa manoratra tatitra, lahatsoratra bilaogy na antontan-taratasim-paikady aho dia avelako hanelingelina ahy kely loatra ny flotsam sy ny jetsam an'ny dock MacBook Pro ahy.
Omaly fotsiny, ry namako Strategiste marika marihitra, Brant Kelsey, nampiseho tamiko fitaovana famokarana roa natao hamela ny olona hifantoka lavitra amin'ny zavatra iray monja. Alao an-tsaina izany. Fitaovana mamokatra izay mandrisika ny saina maharitra amin'ny lahasa tokana fa tsy manery ny fandaharam-potoana go-go-go malaza indrindra. Liana? Ry mpampiasa Mac, zahao ireo rindranasa ireo:
WritingRoom - tontolo manodidina ny fanoratana maimaim-poana
Ity fampiharana ity dia mamadika ny efijery manontolo ho lasa interface tsotra izay manafina ireo sary hita maso rehetra ary manakana ny fampahatsiahivana sy ny fikandrana miresaka. Raha tianao ny manoratra ny naotinao amin'ny hetsika, ny WritingRoom dia fomba iray tsara hanakanana anao tsy hanindry tampoka amin'ny alàlan'ny mailakao, kaonty Twitter, Facebook ary ireo fanelingelenana kely hafa mety hanakana anao tsy hifantoka amin'ny fampahalalana omena.
Spirited Away - fanafenana mandeha ho azy ny fampiharana tsy miasa
Spirited Away dia manao izay lazain'ny anarany. Amboary fotsiny ny toerana misy anao araka ny itiavanao azy ary ny fampiharana dia miasa eo afara mba hanafenana ireo fikandrana tsy miasa. Heveriko fa toy ny manana mpikarakara tokantrano mandray ireo taratasy potipotika ary hamerina ireo boky eo ambony talantalana rehefa miasa amin'ny tatitra nataonao ianao.
Rehefa mandray an'i Douglas ianao toro-hevitra hanakanana ora vitsivitsy amin'ny alatsinainy hifantoka amina tetikasa tokana, angamba azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo fitaovana ireo.
Fanavaozana: WordPress izao dia manana efijery fitaratra feno izay mamela anao hanoratra nefa tsy misy ny korontana fitantanana rehetra!
Tags: mameno efijeryafa-tsy asaWritingfitaovana fanoratana
Tsy mividy fahalavorariana intsony ny mpanjifa
Aug 30, 2009 amin'ny 9: 17 AM
Tsy mila fitaovana amin'ny lahasa tokana aho, fifehezana kely fotsiny. Vonoy na aza velomina ireo rindranasa manelingelina ireo raha te-hifantoka amina lahasa iray ianao. Tsotra izany ary mety amiko io indrindra rehefa tsy maintsy manoratra fampisehoana na lahatsoratra bilaogy na taratasy aho. Ary amin'ny alalàn'ny famokarana vokatra rehefa manao lahasa tokana ianao.
Tsy mila manahy ianao fa ho hitan'ny tontolo iainanao raha mampiasa fizarana fotoana ianao, manokana fotoana ho an'ny asa manokana ary rehefa manao an'io fotsiny. Toy izao no nandrafetana programa solosaina tamin'ny andro taloha fony ny orinasa iray manontolo dia tsy nanana solosaina lafo vidy afa-tsy iray. Ireo mpampiasa dia mbola nanana ny fahatsapana fa mandeha ho azy ireo fotsiny. Ny fikafika dia ny fisafidianana ny elanelam-potoana fotsiny mba hahatonga ny fotoana valiny hamoronana io fahatsapana io amin'ilay olona. Satria iray ihany ny atidohantsika, ity dia toa algorithm tsara handaminana ny asako.
30 Aogositra 2009 amin'ny 3:56 PM
Milay be, Nila! Tsy tsapako akory fa misy fitaovana any ary izany no tiako omena ny Blog Teknolojia Marketing. Misaotra betsaka amin'ity lahatsoratra ity!
Aug 31, 2009 amin'ny 2: 14 AM
Marina ny lazain'i Christian fa ny atidoha no fitaovana tsara indrindra hampiasana andraikitra tokana. Ny manapa-kevitra amin'ny fifantohana amin'ny hetsika iray fotsiny dia ny safidy lehibe indrindra azonao atao rehefa miasa ianao.
Aug 31, 2009 amin'ny 7: 42 AM
Yeap… mifanaraka amin'ny Christian aho… .. ati-doha tokoa ianao.
Sep 8, 2009 ao amin'ny 1: PM PM
Misy manana soso-kevitra azo ampitahaina amin'ny PC ve?
Oct 9, 2009 amin'ny 2: 41 AM
Hanoro hevitra aho (toy ny nataoko tao amin'ny lahatsoratro momba ny Zombies sy ny Art of Single Tasking) amin'ny fampiasana DarkRoom, kinova Windows an'ny WritingRoom.
1 Okt 2009 amin'ny 6:42 PM
Faly be aho fa nahita ity lahatsoratra ity! 😀 Manana olana mifantoka aho noho ny adhd ary rehefa eo amin'ny Internet aho dia manerana ny toerana. Fampiharana mihoatra ny vitsivitsy ary tsy latsa-danja amin'ny takelaka am-polony misokatra. Amin'ny maha junkie lozisialy ahy dia nahavita nahita programa mihoatra ny vitsivitsy aho hanampiana amin'ny fitantanana fotoana, fandaminana ary famokarana. Manararaotra ihany koa ireo addons firefox ho an'ny tab, bookmark ary ny toy izany.
Ireto misy vitsivitsy ampiasaiko…
-TooManyTabs (tahirizo ny kiheba betsaka araka izay irinao amin'ny tsipika voafantina, tsipika tsy voafetra)
-TabFocus (tondroy ireo vakizoro sy fisokafanala misokatra)
-InstaClick (rt tsindrio url rehetra ary manokatra amin'ny takelaka hafa izy-dia miasa amin'ny gmail ihany fa tsy Thunderbird)
-RemoveTabs (manidy ny takelaka ankavia sy havanana)
-AddThis (tsindrio rt ary manampy url amin'ny tranonkala sosialy maromaro — tsara amin'ny sioka)
Misaotra amin'ny atiny tena ilaina sy mampahalala. Mpanoratra sy mpanaraka vaovao aho!